Masar Oo Golaha Amaanka Ka Dalbatay Faro Galin - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMasar Oo Golaha Amaanka Ka Dalbatay Faro Galin
Masar ayaa Jimcihii ka codsatay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay soo dhex gasho wadahadalada ku saabsan Mashruca Biyo-xidheenka 4 ta bilyan ee doollar ku baxayso ee ay Itoobiya ka dhisayso wabiga Nile.
Codsigan ayaa yimid xilli xiisada ka dhex aloosan labada wadan ay kordhayso illaa iyo markii ay fashilmeen dhowr jeer wada-hadallo socday oo dhex maray Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay ku guul darreysteen inay soo saaraan heshiis laga gaadho qaabka buuxinta Dhaamka.
Bayaan ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibedda ee Masar ayaa lagu yidhi: “Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar waxay qaadatay go’aan iyada oo ka duulaysa hakadka ku yimid wadahadaladii buuxinta biyo-xidhka iyo sida ay Ethiopia wax u wado oo aan ahayn si togan,.” ayaa lagu sheegay warsaxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibedda.
Wadahadalada ku saabsan biyo xidheenka ayaa mar kale la joojiyay horaantii todobaadkan iyada oo aan wax heshiis ah laga gaadhin in kasta oo lafilayo in Itoobiya bilawdo buuxinta bisha soo socota.
Muranka tobanka sano jira wuxuu muujinayaa damacyada u dhexeeya labada ummad. Itobiya waxay rajaynaysaa inay noqoto dhoofiyaha tamarta ugu weyn Afrika, iyada oo ka soo horjeedda walaaca Masar ee ah in biyo-xidheenku uu si weyn hoos ugu dhigi doono biyahii ay heli jireen, haddii si dhaqso leh loo buuxiyo. Masar, oo gebi ahaanba ku tiirsan wabiga Niil biyo-qabatinka cusub, ayaa sidoo kale ka walaacsan Itoobiya inay isticmaasho biyo badan inta lagu gudajiro xiliga Jiilaalka.
Imaanshaha xilli-roobaadka ayaa biyo badan u keenaya webiga Niil – qaybtiisa Blue Nile-ka oo ah waaxda ugu weyn ee wabiga oo asal ahaan ka soo burqata harada Tana ee Itoobiya – taas oo ka dhigaysa wakhti ku habboon oo lagu bilaabi karo buuxinta kaydka biyo-xirdhenka bisha July.
Masar iyo Itoobiya ayaa labaduba aaminsan tillaabooyin militari oo ay ku ilaalinayaan danahooda, khubaradu waxay ka baqayaan in kala go ‘ku yimaadda wadahadallada ay horseedi karto khilaaf.
Af hayeenka madaxtooyada Masar Bassam Rady ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Abdel Fattah el-Sisi uu dib u eegay cutubyada dagaalka ee ciidamada cirka subaxnimadii Sabtida. Milatariga ayaa “awood u leh inuu difaaco amniga qaranka Masar gudaha iyo daafaha xuduudaha qaranka,” ayuu yidhi.
Waraaqda Masar ay u dirtay Golaha Amniga Jimcihii waxay ku saleysantahay qodobka 35-aad ee Axdiga U.N., kaasoo u oggolaanaya xubnaha inay soo wargaliyaan golaha wax kasta oo khatar gelin kara nabadda iyo amniga caalamiga ah.
In kasta oo Masar ka walaacsan tahay, biyo-xidheenku waa udub-dhexaadka dalabka Itoobiya ee ah inuu noqdo kan ugu weyn dhoofinta tamarta Afrika, dalkuna wuxuu mashruuca u aqoonsan yahay, mid uu kula dagaalamayo saboolnimada malaayiin ruux oo shacabka wadankooda ah.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Itoobiya Gedu Andargachew ayaa jimcihii u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in dalkiisu uu bilaabi doono buuxinta biyo xidheenka bisha soo socota, xitaa iyada oo aan heshiis la gaadhin.
“Anaga ahaan qasab maaha inaan heshiis gaadhno ka hor intaanan bilaabin buuxinta biyo-xidheenka, markaa waxaan bilaabi doonnaa nidaamka buuxinta xilli-roobaadka soo socda,” ayuu yidhi.
Wuxuu intaas raaciyay “waxaan rabnaa inaan cadeyno in Ethiopia aysan ka baryi doonin Masar iyo Suudaan inay u adeegsadaan khayraad biyood kooda dhinaca horumarka,” isagoo sheegay in Ethiopia ay bixineyso lacagta biyo xidheenka.
Mareykanka horaantii sanadkan wuxuu isku dayay inuu heshiis dhex dhigo dhinacyada muranku ka dhexeeyo, laakiin Ethiopia kamay soo qeybgalin shirkii saxeexa waxayna ku eedeeyeen maamulka Trump inuu garab istaagayo Masar.
Donald Trump: “Ilhan Omar Waxay Doonaysaa In Maraykanka Ay Ka Dhigo Sida Somaliya Oo Ah Meel Fawdo Ah Oo Guul-darraysatay”